Monday December 11, 2017 - 11:06:43 in Wararka by
Malaayiin qof Falasdiiniyiin ah ayaa taagan waddooyinka magaalooyinka ixtilaalka kujira sida Qudus,Alkhaliil iyo deegaannada loo yaqaan Daanta Galbeed.
Video si aad ah layskula dhax qaaday baraha Bulshada ayaa muujinayay Wiil dhalinyaro Filasdiini ah oo darsi udhigaya tobaneeyo ciidamo Yahuud ah, wiilka ayaa luqadda Englisk-ka oo fasiix ah kula hadlaya Askarta Yahuudda oo uu u sheegayo in ay dhici doonto maalin dhammaan Yahuudda xoog looga saarayo dhulalka Barakeysan ee ay xoogga ku qabsadeen.
"waxaa jiri doonta maalin aad naftiina ku oran doontaan Rabiyoow shalaytadeyniyeey maxaan uga dhalanay Israa'iil (Yahuud), waa maalin aad ilasoo xiriiri doontaan si aan idiin cafiyo, hadaad itusisaan awoowyadiin oo ku dhashay halkan oo Filasdiin ah waxaan idin siinayaa gurigeyga, waxaa tihiin soo galooti dibadda lagasoo daabulay oo dhulalkeeni xoog lagu dajiyay, xusuusta Britain iyo Roma oo sedax meelood mar caalamka qabsaday hadda halkee ku dambeeyeen isweydiiya,hadda israa'iil waxay doonaysaa in ay Falasdiin qabsato taas waxaa diidaysa Fitrada insaniyadda"ayaa kamid ahaa hadalladiisa.
Wuxuu ciidamada Yahuudda u sheegay in haddii ay iyagu adeegsanayaan hub casri ah ay Falasdiiniyiintu ku hubeysanyihiin iimaan ayna rumeysanyihin in maalin uun Yahuudda xoog looga saari doono dhulalka Barakeysan oo ay ixtilaaleen.
Wiilkan dhalinyarada ah ayaa ka yaabiyay tobanaan ciidamo Yahuud ah waxaana xilligaas magaalada Qudus waddooyinkeeda ka socday dibad baxyo ay dhigayaan shacabka Muslimiinta Filasdiin.
Hadalka xaqqa ah ee Ruuxan filasdiiniga ah uu ka horjeediyay ciidamada Yahuudda ayaa indhaha caalamka soo jitay waxaana si aad ah loogu faafiyay Telefeshinnada iyo Baraha Bulshadu ku wada xiriirto.